Talibaan oo Mareykanka dalab xujo ah hor dhigtey oo ku aadan dilka Osama Bin Ladin – SBC
Talibaan oo Mareykanka dalab xujo ah hor dhigtey oo ku aadan dilka Osama Bin Ladin
Dhaqdhaqaaqa hubaysan ee reer Afgaanistan ayaa dawlada Mareykanka waxay ka dalbadeen inay soo cadeeyaan geerida Osama Bin Ladin, iyagoo sheegay inaanay rumaysneyn in Osama ay dileen ciidamada Mareykanka.
Afhayeenka Taliban Zabiullah Mujahid ayaa warsaxafaadeed E-mail loogu qaybiyey saxaafada aduunka wuxuu ku sheegay inay ka doonayaan dalwada Mareykanka cadeyn muuqaalka ama sawirka Bin Ladin oo meyd ah, iyagoo sheegay in taasi hadii aanay keenin xukuumada Mareykanka inay u arkaan warka dilka Bin Ladin mid la dhoodhoobay. “Warkan ku saabsan geerida Sheikh Osama wuxuu ka yimid hal dhinac kaasi oo ah xafiiska Obama, Ameerika waxaan ka rabnaa cadeyn ay ku xoojinayaan sheegashadooda” ayuu yiri Zabiullah Mujahid afhayeenka Taliban.
Hadalka ka soo baxay dhaqdhaqaaqa Taliban ayaa ku soo aadayaa iyadoo dawlada Mareykanka aanay wali soo bandhigin cadeymo rasmio ah oo muujinaya dilka Osama Bin Ladin hogaamiyaha shabakada Al-qaacida, inkastoo Washington ay ku adkeysanayso inay hayso cadeymo dhab ah balse loo baqayo dareenka dadka Muslimiinta oo ku aadan soo bandhigida sawiradaasi oo lagu sheegay kuwa aad naxdin badan oo ay dhici karto inay abuuraan soo bandhigoodoodu caro ka timaada muslimiinta dunida.
Walahay Been ayay Sheegayaan Osama anaa Hada Soo Arkay
dilka osama ee muranka dhaliyey aniga waxay ilatahay in ay san maraykan dilin ee ay helan asaga oo mayd ah ama ay ogaden in uu dhintay ka dibna ay iska dhigeen kuwa ayagu dilay lakin osama waxa uu aha mujahid shahid ah oo diintiisa u dhintay naxariis ayan eeba uga baryeynaa iyo in uu janadii geeyo